ဪ! (ဒို့ဗမာတွေ ဒီလုပ်ရပ် လက်ဆင့်ကမ်းလို့မရပါလါး?) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဪ! (ဒို့ဗမာတွေ ဒီလုပ်ရပ် လက်ဆင့်ကမ်းလို့မရပါလါး?)
ဪ! (ဒို့ဗမာတွေ ဒီလုပ်ရပ် လက်ဆင့်ကမ်းလို့မရပါလါး?)
- SkyHeart WinKo
Posted by SkyHeart WinKo on Jun 12, 2012 in Copy/Paste | 32 comments
ချက်ခြင်းရှင်းပြချင်ပါသည် သို့သော် (၁၁.၆.၂၀၁၂) မနေ့ညက ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံမှာ
ကလေးတစ်ယောက် သွားကယ်နေရလို့ပါ ဘယ်လိုကယ်တာလည်းလို့ မမေးနဲ့တော့ဗျာ ဆရာဝင်မလေးတော့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကြောင့် ငိုသွားလေရဲ့
ဒါပေမဲ့ သူသာစိက်ဓါတ်ပြင်ခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့လိုက်မမှီတော့အောင်
အုပ်ချူပ်သူ မည်သည့်ရာထူးဖြစ်ပါစေ ဗမာပြည်မှာမွေးကြတဲ့ သူတွေပါ။
စုန်းပြူးတွေအများကြီးပါသလို၊ လက်တွေ့တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကူညီတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်။
အားလုံးက ကောလဟာလ နောက်ကို ဝေလေလေ ငါဆိုတဲ့အတ္တတွေနဲ့ ဖြစ်ချင်တာဘဲ တွေးခေါ်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေကြလျှင် တိုင်းပြည်က ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို
ဖါနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။ မင်္ဂလါဈေး (JJ CLUB) နားမှာနေပါတယ်။
DVD နှစ်နဲ့ချီပြီးလူငယ်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အခွေလါယူနိုင်ပါတယ်။ အသေခံသွားတဲ့ လူငယ်လေးအသုဘလည်း ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
ဒီခွေကို NLD ကစုန်ပြူးတစ်ယောက် တရားစွဲတယ် မင်္ဂလါတောင်ညွန့်တရားရုံးမှာ
မည်သည့်အရာနှင့်မှ မညှိစွန်းတဲ့အတွက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊
ပါတီတွေပြိုင်တော့ လှေကိုမျက်နှာခြင်းဆိုင်လှော်သလို တိုင်းပြည်ကဘယ်ကိုရွှေ့မှာလည်းဗျာ။
ဒီတော့ တစ်ကယ်ဘဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင် အတ္တမရှိတဲ့လူလါခဲ့ပါ။
လက်ညိုးကြီးတွေထိုးပြီး ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ဟော့ရှော့လုပ်ပြီး မိုက်တစ်လုံးပြောနေလည်း
ငါဒို့က မင်းထက်သိလို့ အုပ်ချူပ်နေတာ မင်းအဖေတစ်သက်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျာ။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ရန်အတွက် မျိုးချစ်စိက်ဓါတ်နှင့်လက်တွေလိုနေတာပါ၊ ပါးစပ်တွေမဟုက်ပါဘူးကွာ၊ ၈နစ်ရှိပြီ ငါစောင့်နေပါတယ်။
သူများအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်လုပ်ခဲ့ဘူးလျှင် နားလည်ပါလိမ့်မယ်၊
လါခဲ့ပါလါးကွာ။အင်္ဂလိပ်ကား (MACHINE GUN PREACHER) DVD အခွေကြည့်လျှင်လည်း ပိုပြီးနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ကို htoosan အဲဒီလိုတော်တဲ့လူ မျှော်နေတာ သိမ်းချင်လို့လုပ်တာ မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ DVDကြည့်ပြီနင်နေတယ်လေ။
လူမိုက်ကြီးကတော့ မရှင်းတော့ဘူး အမေစုထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါ ကျွန်တော်နင်နေတယ်လေ။
လူငယ်ဂီက ကတော့ငွေကုန်တယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ကေ ဆးရုံမှာ ကလေးတွေကို ပေးနေတယ် ကျွန်တော်မသေသေးပါ။
Choose asaBest Comment
About SkyHeart WinKo
SkyHeart WinKo has written 8 post in this Website..
View all posts by SkyHeart WinKo →
နှစ်ခေါက်ဖတ်တာတောင် … ဆိုလိုရင်းကို ဂဃနဏ သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ……. ။ ကိုယ်ကပဲ ဉာဏ်မမှီလို့လား မသိဘူး ……… ။
ုKOWINKO ပြောတာကိုကျနော်လက်ခံပါတယ် ပါတီပြိုင်တွေ ရှိရင် တိုင်းပြည်ကြီးကတိုးတက်လာ မှာ မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်ကနိုင်ငံရေး နားလည်သူတော့မဟုတ်ပါဘူး ပါတီတွေမရှိဘဲ တိုင်းပြည်ကို စုပေါင်းတည်ထောင် ကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံကြီးဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါကြောင်း
ကျွန်မကတော့အဲလိုမထင်ဘူး။ ဘာမဆိုအပြိုင်ရှိမှတိုးတက်တာချည်းပဲ။ နိုင်ငံတခုမှာ ပါတီပြိုင် မရှိပဲ တပါတီထဲကနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လာတဲ့ ခါးသီးမှု့တွေကို ကျွန်မတို့ခံခဲ့ကြရပြီးပြီပဲ။ အခုမှလွတ်ခါစပဲရှိသေးတာ။ ဦးဆောင်မဲ့ပါတီတွေမရှိပဲ ဘယ်သူတွေက တိုင်းပြည်ကိုစုပေါင်း တည်ထောင်နိုင်မှာလဲ။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပါတီတခုကတော့အနဲဆုံးဦးဆောင်ရမှာပဲ။ အဲဒီပါတီလုပ် ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရအောင် မှားနေတာကိုထောက်ပြလို့ရအောင် အနဲဆုံးနောက်ထပ် ပါတီ နှစ်ခုလောက်ရှိသင့်တယ်။ ဒါမှလဲ အဲဒီထောက်ပြတဲ့ ပါတီဘက်လိုက်လို့မရအောင်။ ဦးဆောင်သူမရှိပဲ သူတလူငါတမင်းနဲ့ကတော့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့မမြင်မိပါဘူး။ ဦးဆောင်သူခေါင်းဆောင်ကောင်းအောက်မှာတောင်သူတလူငါတမင်းလုပ်နေကြသေးတာပဲ။
ကိုဝင်းကိုလှိုင်ပြောတာတွေကိုနားလည်ဘို့ က အခွေကြည့်ရမယ့်ပုံ ဖြစ်နေတယ်..
အဲတော့ sunday အခွေလာယူပါမယ်…ဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ် …
မဂျူဂျူးမ .. အခွေရလျှင် .. ညီမဆီ ဖုန်းဆက်ပေးပါနော်… ။
အပြင်မှာ ဆုံပြီး ကူးကြည့်ချင်လို့ပါ .. အဟီး ။
အခွေရောင်းချင်တာမဟုတ်ဘဲ လူသိစေချင်တာဆိုရင် MG မှာတင်ရင်ပိုေတောင်လူသိများအုံးမယ်။ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုရေးပြီး ကွန်မန့်ကို ပို့စ်လုပ်တင်နေတာနဲ့စာရင် DVD တချပ်စာအကုန်တင်ပေးလိုက်အေးရော။
ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်စေချင်တာပါ။ အခွေလေးတောင် အပင်းပန်းခံ လါမယူနိုင်ရင် ပြောနေကြတာတွေက ဝေလေလေဘဲ လို့ထင်မိတယ်ဗျာ။
ဒို့ဗမာကွဆိုပြီး လက်တွေ့လေးလည်း တစ်ခုလောက် ကြည့်ချင်တယ်ဗျာ။
ုkoko thant လောက်သိရင် ကျေနပ်မိပါတယ်၊ အားရှိတယ်ဗျာ။
DVB မှာ ရွှေဩဝါ ဆရာတော်ကြီး ၁၂.၆.၂၀၁၂ ည ၉း၃ဝ အချိန်တွင် ရှင်းပြသွားပါသည်။
ဘာတွေရှင်းပြသွားတာလဲဗျ။ သေချာလေးပြောပါအုန်း။ post ကလဲ မရှင်း comment ကလဲမရှင်းနဲ့။ သေချာလေးရေးပေးပါဗျ။
နာလဲ တူတူပါပဲ မွန်မွန်ရယ်။ မီတူး..မီတူး…………ဟီးးးးးးးးးးး။
me 3, me 3
ဖတ်ရင်းနဲ့ကို လည်နေတယ်။ ဆရာဝန်မကိုပဲ မြင်ရမှာလား.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်ဘူး။ ဘာအကြောင်းကို ဦးတည်သလဲ။ ဟူး ခေါင်းတောင် မူးလာပြီ ဖျားနေပါတယ်ဆိုမှ… ကဲ ဂျူးဂျူးမရေ… အခွေ ကြည့်ပြီးရင်တော့ ပြန်ရှင်းပြမှရတော့မယ်ထင်တယ်။
မမThel Nu Aye ရေ နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံလောက်မှာ ခဏသွားနေဘူးလျှင် သိလါပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါ မှားတယ်လို့ ကျွန်မတော့ ထင်ပါတယ် ကိုဝင်းကို။
သဲနု ပြောတာကို ကျွန်မ ထောက်ခံပါတယ်။
တစ်ပါတီ ဘဲ ရှိရင် အာဏာရှင် စနစ် ဆိတ်သုန်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ပါတီကို စောင့်ကြည့် ဝေဖန် နေတဲ့ အပြိုင်ပါတီရှိမှ မဟုတ်တာ မလုပ်ဖို့ သတိပေး သလို ရှိမှာပါ။
တကယ်တော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပါတီပြောင်းတိုင်း မူတွေပြောင်း တာ ကောင်းတယ် လို့ မထင်ပေမဲ့ အထိန်းအကွပ် အတွက် ပါတီပြိုင် ရှိကိုရှိရပါမယ်။
မဟုတ်ရင် အာဏာ အလွဲသုံးစား ဆိုတဲ့ ထူးမခြားနား ပတ်ပျိုးဘဲ ကြားရပါမယ်။
ကျွန်မ လဲ နိုင်ငံရေး နားမလည် ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ရိုးရိုး လေးတွေးကြည့်ရင် လူ လိုဘဲပေါ့။
ကိုယ်တစ်ယောက် ထဲ ဆို စိတ်တိုင်းကျ စိတ်လွတ်လက်လွတ် နေသွားတတ်တယ်။
တစ်ယောက်ယောက်က ကြည့်နေတယ် ဆိုတာ သိတင် နဲနဲ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေကြသလိုပေါ့။
DVB မှာ ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကြီး ၁၂.၆.၂၀၁၂ ည ၉း၃ဝ အချိန်တွင် ရှင်းပြသွားပါသည်။
နိုင်တဲ့ပါတီက အုပ်ချူပ်တယ် ဆိုလျှင်မှန်ပါသည်။ ယခုဘယ်သူက အုပ်ချူပ်နေတာလဲဟင်၊ ထပ်ပြီးရှင်းပြလျှင် ကျွန်တော့်ကို အင်းစိန်ပို့ဘို့ လါခေါ်တော့မယ်ဗျာ။
အရီးရေ စာမျက်နာကြော် မမြင်နဲ့နော် အဝေးကြီးဗျာ။
ရုရှားနိုင်ငံကို ကြည့်ပါ ပြဿနာတူနေတာတွေ့ပါလိမ်မည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ စကား (ဘယ်သူ့မှာတာဝန် ရှိလည်းလို့) စာစောင်မှာလိုက်ရေးတော့
အပိတ်ခံရပြီး ၅ည ဆိုတဲ့ပိုဒ်မ ထုက်လိုက်ပြီနော်။
(ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ ဒါလူတွေရဲ့ ထုံးစံ)
သမီးက ရွာထဲကို ဝင်တာ ဒီနေ့မှပါ စာတွေတော်တော် များများကိုတော့ လိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် သမီးအတွက် ဗဟုသုတ အများကြီး တိုးပွားစေပါတယ်။အခု ဒီဦးလေး ရေးတဲ့စာကို ဖတ်ရတော့ အလွန်ကောင်းတဲ့ စေတနာ ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့အရာတွေ သိပ်နားမလည်ပါဘူး ရှုပ်ထွေးပါတယ် သမီးအဖိုးကို ပြကြည့်တော့ အင်း ဒီကောင်လေး ငယ်အုံးမယ်ထင်တယ်တဲ့ ပြောခြင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို စာအရေးအသားပိုင်း နည်းနည်းသီးလို့ အောက်မှာ နားလည်မှုတွေလွဲကြ တာတဲ့ အောက်က ပြောတဲ့သူတွေက လူငယ်တွေ များမယ်ထင်တယ်တဲ့ အဲလို မှတ်ချက်ပေးပါတယ် နောက်ပီး အလှူကိစ္စဆိုတာထက် (မိမိရဲ့အယူအဆကို ဇောင်းပေးပြီး အားပြိုင်နေတာတဲ့ ) သမီးပိုပီး နားမလည်တော့ပါဘူး။
သမီးသိချင်တာက အခုလို အလှူအတန်း ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို အဲဒီအလှူကိစ္စနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဘယ်လိုလှူမယ်၊ ဘာတွေလှူမယ်၊ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာ အကောင်အထည် ဖော်မယ် စသဖြင့် သက်ဆိုင်တဲ့ အတင်းအချက်အလက်တွေ တိုက်ရိုက်ဖြန့်ဝေတာ မမြင်ရလို့ နားလည်ရခက်စေပါတယ်။
သမီးအမြင်ရတော့ လှူပါတယ်ဆိုမှ စိတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ ဘယ်သူရရ အကောင်အထည် ဖော်လိုက်စေချင်ပါတယ်။ ဘဘက ဦးဆောင်သူဆိုရင်လဲ တကယ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ နောက်ပြန်လှည့်ပြီးပြောတဲ့ စကားတွေ မပါရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် သမီးဒီစာကို ဖတ်ပီး သိကြားမင်းကြီးက ဟိုးအမြင့်ကြီးကနေ ဒေါသတကြီးနဲ့ သမီးတို့နားမလည်တဲ့ စကားလုံး အကြီးကြီးတွေ သုံးပီး နားမလည်ရကောင်းလားဆိုပီး ဆူပူကြီမ်းမောင်း နေပုံနဲ့တူလို့ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း လှူဖို့ထက် အပြင်းအထန် ငြင်းခုံလိုစိတ်တွေ ပေါ်လာရပါတယ် နောက်တော့ ကိုယ်တိုင်လဲ ဝင်မပြောဝံ့ မပါဝင်နိူင်လို့ ကိုယ့်ကိုကို အားမရဖြစ်ပြီး မျက်ရည်တွေတောင် ဝဲမိပါတယ် ဘဘရယ်..။
အတွေးအခေါ် မပါတဲ့ စာတွေ ဖတ်လို့မကောင်းတာ ကိုတော့ သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တခါတလေမှာ တိုတိုနဲ့လိုရင်းက ပိုပီး ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ သမီးဖိုးဖိုးက ပြောပါတယ်။အခုဒီစာကိုလဲ သမီးဖိုးဖိုးကို ပြပီးမှ ရေးတာပါ ဖိုးဖိုးက ဒီမောင်ရင် နားလည်မှာပါကွယ်တဲ့ သူရဲ့ပြောပြချင်တဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို သူရဲ့မြင့်မားတဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေနဲ့ အရေးအသားပိုင်းတွေကြောင့် အောက်ကလူတွေ လိုက်မမှီဘဲ မခံယူနိူင်ဘဲ ကွဲလွဲတာပါတဲ့ ဒီကလေး အလွန်တော်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပါတဲ့။
ဘဘရဲ့ တိုင်းရင်သားတွေအပေါ်ထားတဲ့ အမြင်နဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာတွေကို သမီးအမြဲလေးစားပီး ထောက်ခံနေမှာပါ အခုရေးနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ ဘဘရေးခဲ့တဲ့ စာတွေကို ဖိုးဖိုးဖတ်ဖို့ သမီး print ထုတ်ပေးနေတာပါ။ ဘဘဆီက သမီးအများကြီး သင်ယူရမှာပါ နောင်တချိန်မှာ ဘဘရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆနဲ့ ရေးသားဖော်ထုတ်မှုတွေဟာ သမီးတို့လို လူငယ်တွေနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ အထိကြိုးစားသွားမယ်လို့ ကတိပြုရင်း…..။
မှတ်ချက်။ ။ User name ကိုတော့ မလိုလားအပ်တာတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ သမီးနာမည်ရင်း မရေးရဲပါ။ ဘဘအပေါ် လေးစားသမှု ကြောင့် နာမည်ရင်းနှင့်တကွ ဖော်ပြလိုက်တာပါ။
Pitbull နော်ရီဖောအေး(ခေတ္တ ဘန်ကောက်)
တစ်ကယ်ဘဲ မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်၊ အရမ်းလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အားရှိပါပြီ။
လူတစ်သိန်းထက် တန်ဘိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဘဲ လိုတာပါ။
Sky Heart Travel & Tours Company Limited 0950 82808
တစ်ကယ်ကို လိုက်မမှီ နားလဲမလည်ပါ။ကော်မန့်တွေပြန်ပေါင်းထားသလိုကြီးဘဲ။
ခေတ်သစ်စာအရေးသားပုံစံဆိုရင်လဲ ကျွန်တော်က တောသားမို့ မသိတာဘဲ
ခေတ်ကအရမ်းနောက်ပြန်ဆွဲနေတော့ အားလုံးကအချိန်လွန်တော့မှ အော်… အဲဒီတုန်းက အဲဒါကိုပြောနေတာကိုး ဆိုပြီးနားလည်ကြတယ်လေ၊ ဒါပေမဲ့နောက်ကြကုန်ပြီဗျာ။
ဒါနောက်ဆုံးပါ အားလုံးရဲ့အင်အားတွေလိုပါတယ် အင်တာနက်မှာမဟုက်ပါဘူး ဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကို လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အာလုံးကို လါတွေ့ချင်ပါတယ်
နောက်တခါကျရင် ကျနော်တို့ နားလည်အောင်ရေးပြ.ပြောပြပါ နော့
ဘယ်သူတွေကဘာတွေမှန်း မသိတဲ့အတွက် တွေ့ဆုံမှ လက်တွေ့ရှင်းပြလို့ ရမှာပါဒါကြောင့်တောင်ပန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။